Qaarada Afrika waxaa lagu bartay afgembi militari, ku shubasho doorasho iyo madax diida inay xukunka wareejiso marka laga guuleysto. Hadaba dalka Soomaaliya ee ka soo kabanaya daqaradii dagaalada sokeeye ayaa waxa uu tusaale fiican oo lagu dayan karo u noqday qaarada Afrika inteeda kale maadaama 8 madaxweyne ay si nabad ah xilka isugu wareejiyeen muda 16 sano ah gudahood. Warbaahinta dalka Kenya ayaa maalintii shalay Baahisay Maqaal ay uga Faaloonayso Soomaaliya, Iyadoo Ugu baaqday madaxda Kenya iyo kuwa kale ee Afrika inay wax ka bartaan Madaxda Soomaaliya. - iftineducation.com
iftineducation.com – Hanti dhowrka guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ayaa sharci darro iyo musuq maasuq ku tilmaamay heshiiskii ay meel mariyeen Labada Gole ee Baarlamaanka Somaliland ee ahaa in Imaaraadka carabta saldhig milateri ka sameystaan magaalada Berbera.
Si kastaba ha ahaatee ansixinta heshiiskan Imaaraadka Carabta loogu ogolaaday inay saldhig milateri ka sameystaan Berbera ayaa dhaliyay dood iyo muran weyn, iyadoo Xisbiyada mucaaradka qaarkood ay ka soo hor-jeesteen heshiiskan.